बुद्धमूर्ति अगाडिबाट जनयुद्धका पक्षबारे प्रचण्डको खुलासा- ‘म पूर्णरुपमा इन्गेज भएको दाङ आक्रमण’ « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
बुद्धमूर्ति अगाडिबाट जनयुद्धका पक्षबारे प्रचण्डको खुलासा- ‘म पूर्णरुपमा इन्गेज भएको दाङ आक्रमण’
२०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा भयो, त्यसपछिका झण्डै १० बर्ष रक्तपातपूर्ण रहे । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने नारासहित सुरु भएको थियो जनयुद्ध ।
कसरी बनाएका थिए प्रचण्डले जनयुद्धको योजना ? दाङ आक्रमणको प्रचण्डले नै किन रेकी गरे ? प्रचण्डले आज जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्मका विविध पक्षका खुलासा गर्ने भएका छन् । एबीसी टेलिभिजन उक्त अन्तरवार्ता आज राती ९ बजे प्रशारण गर्ने भएको छ ।
एबीसी टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले जनयुद्धका बेलाका कैयन आन्तरिक कुरा समेत गरेका छन् । उक्त अन्तरवार्ता एबीसी टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम आउटलुकमा प्रशारण हुनेछ ।
अन्तरवार्तामा प्रचण्ड बुद्धका मूर्तिहरु अगाडि बसेको देख्न सकिन्छ । साथै अन्तरवार्ताकार र प्रचण्डको बीचमा पनि ठूलो बुद्धको तस्वीर राखिएको छ ।
अन्तरवार्तामा प्रचण्डले भनेका छन् – ‘नेपालमा शशस्त्र संघर्ष गर्न आवश्यक छ । जनयुद्ध गर्न आवश्यक छ । जनयुद्ध बडो सोंचे सम्झेर विचार गरेर नै गरिएको हो ।’
‘मैले आफैले इन्गेज भएको दाङ हो । दाङको ब्यारेकमा पहिलोपटक हमला गर्ने बेलामा म इन्गेज भएको हो । त्यसको योजना बनाउने, शक्ति केन्द्रीत गर्नेसम्म, योजना बनाउनेसम्ममा पूर्णरुपमा म इन्गेज भएको दाङ हो ।’ – प्रचण्डले अन्तरवार्तामा खुलासा गरेका छन् ।
पहिलो, दोश्रो र तेश्रो वार्ताका रोचक कुराहरु समेत प्रचण्डले अन्तरवार्तामा खुलाएका छन् ।